Nkwụ ụgwọ Online | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Paymentskwụ ụgwọ dị n'ịntanetị dị mfe site na iji Tucasi ScoPay
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa mwepụta nke ụlọ akwụkwọ Oakleigh School na akaụntụ ịntanetị maka ndị nne na nna na ndị nlekọta. Akaụntụ gị ga-enye gị ohere ịlele ego maka ego nri abalị, njem, edo edo na ịkwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ. I nwekwara ike iji akaụntụ gị maka ọrụ ndị ọzọ dị ka imelite nkọwa kọntaktị gị iji nata ozi-e ma ọ bụ ozi ederede sitere na ụlọ akwụkwọ, yana ịlele akụkọ nri nwa gị.
Can nwere ike iji otu akaụntụ ahụ maka ụmụaka ọ bụla ị nwere n'ụlọ akwụkwọ a, yana maka ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ na-ejikwa Tucasi nọrọ ná nchebe scopay.com usoro.
Enwere m akaụntụ scopay.com maka nwa ọzọ:
Banye na akaụntụ gị site na iji aha njirimara na paswọọdụ gị dị ugbu a. Họrọ Njikọ Akaụntụ nhọrọ site na Ama gi menu isiokwu ma tinye ntanetị pụrụ iche n'ịntanetị koodu njikọ ịgbakwunye akaụntụ aha nwata akwụkwọ.
Enwebeghị m akaụntụ scopay.com:
Gị www.scopay.com/oakleighschool na Debanye aha dịka Onye Ọrụ Ọhụrụ. Soro ntuziaka na ihuenyo iji tinye nkọwa gị ma gbakwunye na ntanetị pụrụ iche koodu njikọ maka aha nwata mgbe a kpaliri ya.
Note: Online njikọ koodu bụ maka otu oge were naanị. Achọghị ya ozugbo arụ ọrụ arụ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ n ’ị nweta karịa leta nnweta akaụntụ, maka ụmụnne n’ụlọ akwụkwọ a, mepụta akaụntụ gị dị ka nke mbụ maka nke mbụ wee jikọta nke abụọ jiri ntuziaka dị na‘Enwere m akaụntụ scopay.com ' Nhọrọ n'elu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ịdenye akaụntụ gị ma ọ bụ gbanwee nkọwa kọntaktị gị, ị ga-ahụ njikọ na a Ntughari Ntughari Ntughari na a obere vidiyo nkuzi at www.scopay.com/oakleighschool .
Biko kpọtụrụ ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ na 020 8368 5336 ma ọ bụ emailing office@oakleigh.barnetmail.net.